Kuedza Puppy Linux pane pendrive kana USB kiyi | Linux Vakapindwa muropa
Ipfungwa yakanaka chose kuva nehurongwa hunoshanda uye hwakasununguka kana zvikaitika kwauri kuti zvikamu zvako zvakarovera kana chimwe chinhu chakaitika.
Ini ndanga ndichida mwedzi mizhinji yapfuura kuti ndive neipare pendrive ine diki distro yakaiswa mukati mayo uye yakagadzirirwa aya mabasa, anokwanisa kushanda neinternet yangu kubatana uye kushanda nekhibhodi uye nehunhu resolution.
Kushandisa Puppy iyo inoenda mushanduro 4.2 uye inogadzirira vhezheni yechishanu pamwe nemamwe mapurojekiti senge Woof.
Kupinda mune iyi nyaya, Puppy iri nyore sisitimu yekuisa, iyo, mune yangu kesi, ini ndaingoda Unetbootin, iyo yaiita basa rese uye kuinyora pachigadzirwa.
Muchokwadi, masisitimu akaiswa ne Unetbootin Ivo vanoramba vari Live USB, ndiko kuti, yakanyorwa sekunge yaive madhisiki uye musimboti, ivo havana kugadzirira kunyora shanduko dzinoitwa, hazvina kuita sekuisa sisitimu yekushandisa pane "yakajairika" hard drive, kunyange ichigona zviitwe asi hazvisi Unetbootin zvinoita.
Nyasha dzePuppy ndeyekuti inokutendera iwe kutora mukana weiyi "LiveCD" mamiriro ekumisikidza uye uwane zvakanakisa mairi:
Iyo yekushandisa sisitimu inochengetwa Rarama maitiro pane yedu USB
Iyo pendrive inoteedzera iyo ruzivo mu RAM (izvi zvinoreva kuti yedu pendrive haina kushaiwa nekuda kwekuverenga uye kunyora) pakutanga.
Shanduko dzakachengetwa mufaira inonzi pup_save.2fs pane iyo pendrive, saka tinogona kusevha yakakwana sisitimu yekumisikidza, semuenzaniso, dhizaini yekhibhodi, resolution yechiso kana kumisikidzwa kwe ADSL yekubatana, nezvimwe.
Zvimwe zvakanaka zvePuppy
Shandisa dzazvino tsanga (seArch Linux), iyo inoita kuti zvishandiso zvimhanye pasina mahombe, makuru masisitimu.
Es lightweightKana isu tichizoriisa pendrive, inofanira kunge iri yakajeka nekuti yedu diki "hard disk" ine diki nzvimbo mukati mawo. Muchiitiko chePuppy 4.2, iyo .iso inouya mune saizi isingasviki 100 megabytes.
Vazhinji vakapinda: Iyo distro yerudzi urwu ine vabatsiri vakakwana kuti vasatambise nguva yakawanda mukugadzirisa.
Bhuti rinokurumidza uye zvimwe kana vatove nechengetedzo yekugadziriswa (a .2fs)
Nekuti distro haina kugara yakakwana chero, heano maPuppy akashata mapoinzi.
Zvinyorwa zvidiki uye zvakashata
Yakashata desktop nharaunda (yepamusoro-soro asi kuonga kuri madikanwa, dzimwe nguva hazvifadzi uye masosi acho haana kunaka futi, ini ndinokurudzira kuisa Openbox iri mumidziyo yavo). Iyo yakasarudzika nharaunda ndeye JWM.
Mapepa ekushandisa ekuchengetera zvinhu: Icho chaicho chiri muPuppy, zvisinei ivo vanoedza kuzvigadzirisa nenzira chaiyo.
Uye chii chinonzi Woof?
Woof harisi zita reshanduro kunyangwe iine zvakawanda zvine chekuita neshanduro 5 inova ndiyo iri kugadzirirwa.
MuPuppy vakaona kuti maneja ezvitoro senge mamwe ese ainetesa mumari uye nenguva yekuzvigadzirira pachayo, (iri tsananguro yakanaka yemapakeji mashoma mumatura avo) saka izvo zvavakagumisa zvinonakidza kwazvo:
Wadii kutora zvakananga kutora zvinyorwa zvemamwe ma distros uye kuzvishandisa kwatiri?
Shinda ndeye distros muvaki zvinoenderana nembwanana ichiri mukuvandudza asi izvo zvinongova nechero izvozvi, semuenzaniso, unogona kushandisa zvinyorwa zveUbuntu zvehurongwa hwako kana Arch kana Slackware, zvese zvinoenderana nekunakirwa kwemugadziri.
Zvakare, vashandisi vePuppy vashanu vanozokwanisa kushandisa aya masisitimu uye kuwana yakakura yakakura mapurogiramu nemahurongwa avo ekumisikidza (semuenzaniso, kubva mushanduro 5 Puppy yakatopihwa kuwirirana neDebian mapakeji)
Sezvauri kuona, iyo Puppy Linux nharaunda ine hupenyu uye inonakidza, ini ndinokurudzira kuti utevere avo vanofarira zvinotevera, iyo puppy's blog.
Tiudze nezve chiitiko chako nePuppy ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Kuedza Puppy Linux pane pendrive
Ndanga ndichiyedza mbwanana kwenguva yakati rebei, uye ndakazviona zvakare ndichishandisa liveusb. Ichokwadi kuti haina kuwanda mukushandisa asi nekukurumidza kushandisa izvo zvayakatounza zvinopfuura zvakaringana, uye kana uchiri kuda zvimwe, mumidziyo yeimbwanana uchawana chikumbiro icho chinoita izvo zvaunoda, pamwe kwete iyo yawakajaira asi inyaya yekujairirana nezviripo.
Nezve desktop, kana chiri chokwadi kuti iyo yepamutemo vhezheni yembwa haina kunyanyisa kupenya asi kune imbwa idzo dzinochinjika dzinoitwa nevamwe vashandisi kana vagadziri uye dzinouya kuva neinoyevedza chitarisiko, kunyangwe pasina kurasikirwa mashandiro. Vazhinji vanosarudza icewm iyo inouya kare mune yepamutemo vhezheni asi haisi iyo yakasarudzika nharaunda, kunyange ichigona kufanotemerwa kana munhu achida. Kune vana vadiki vanotombo fambira mberi zvishoma uye vanoshandisa kujekeswa, nechitarisiko chinoratidza kwazvo.
Ehezve haisi iyo yega vhezheni yandinoshandisa se liveusb, ini ndinogara ndine pendrive nesarudzo yekutanga neimwe yeayo maviri kana matatu mavhezheni embudzi uye / kana tumaputi, DSL kana Elive iyo yandichanyatso kubuda nayo. chero dambudziko chero iwe ukarida.
Ehe, izvo chete zvandakawana mbwanana kwaive kushomeka kwekushandisa. Zvisinei, zvinoita senge rakanakisa distro uye panguva iyo yangu yekunakidzwa inorarama.
Ehe, mazuva mashoma apfuura ndakatenga kabhuku kaive kemarara emarara, ine processor yakanaka uye 512 ram, kuwedzera kune yakasanganiswa igp ati x200 vanoiita PC inogona kutengesa nekukasira, dambudziko chete nderekuti haina dhisiki rakaomarara nekuda kwedambudziko rinotyisa rekugadzira iro rinokonzeresa zasi kubhururuka kubva panzvimbo yaro kana imwe yechip dzinozvinyora, hazvo chinhu ndechekuti ini ndaida OS iyo yaisada dhisiki rakaomarara, izvo zvakandibvumidza kusevha paInternet pasina matambudziko, kuteerera mimhanzi, kuverenga zvinyorwa zvemarudzi ese uye kutaura pa msn uye kutamba chimwe chinhu kana chimwe, muchidimbu, kubvisa zvachose windows sarudzo nekuti hapana shanduro inoshanda uye uchifunga sarudzo dze linux dzandakatanga kuyedza SLAX iyo yakapa nyore kugadzirisa uye hwakawanda hwekunyorera kuti uise nekudzvanya kamwe chete, ichi chikumbiro chinovimbisa, asi zvinosuwisa kuti handina kuchida nekuti firefox browser ine yakavakirwa-mukati flash player 10 yakadonha yega, mamwe ese akanakisa nte kugarisana kwakanaka, uye kudyiswa mitambo, ipapo ini ndakaedza neTUQUITO yakanaka kwazvo ubuntu-based Argentine distro ine yakanakisa mutyairi rutsigiro uye zvese zviri nyore zve .deb mapakeji uye ubuntu zvinyorwa, asi hazvitakure kugondohwe uye zvinotanga uye Izvo inoshanda inononoka, ipapo ndakaedza ASTRUMI, diki diki yandinoziva, ine 50 megabytes ehuremu, yakapa chimiro chitsva kwazvo, kugarisana kukuru nebrowser, inotakura yakazara gondohwe, inokurumidza, asi haina rutsigiro iyo yechiLatin keyboard saka ndakairasa nekuti iyo «could» yaisagona kuitwa, zvakare haina nyore kuisa mafomu uye pakupedzisira ndakafunga kuyedza ne PUPPY LINUX (iyo yepamutemo kuburitswa) uye voila! yakazara zvakakwana pagondohwe, inokutendera kuti uchengetedze masisitimu pane iyo pendrive, inokutendera kuti uterere mumhanzi, tarisa vhidhiyo, inowirirana chaizvo interface uye bhurawuza inosangana nezvinodiwa kunyangwe iwe uchizoda imwe yazvino. Muchidimbu, puppy linux inozadzisa zvandanga ndichitsvaga kubva pakutanga kwenyonganiso yangu, kwete zvichienderana nedhisiki rakaomarara uye nekuzvitora sechinhu chinogoneka mukati mechikwata uye nekushandura chinyorwa kuva chishandiso chinobatsira nekuderedza mutengo uye kusvibisa zvishoma
Laura SF akadaro
Zvakanaka kutumira! Ini ndaida chaizvo Mbwanana.
@bawatakco great comment, zvakandiponesawo nguva nenguva ...
Pindura kuna Laura SF
Shamwari sezvaunogona kuwedzera nyowani nyowani kune nautilus mutsvagiri muOpenSuse kana Ubuntu 9.04 mune rondedzero yekutarisa kuwedzera kune gumi nevaviri vauinazvo.
Imwe nzira kana chimwe chinhu chinogona kuchinjwa muLINUX.
Ndiregerere asi muwindo mune iyo data yekutarisa pane zvinopfuura makumi maviri neshanu zvekusarudza kubva pakuchinja kweyekutarisa kwefaira.
Ndiregerere-Ndiregerere kuti ndibvise mawindo kubva mocosoft.
Ini ndinokurudzira kuti ubvunze iwo mubvunzo muLXA foramu! uye wozvigadzirisa zvishoma zvirinani. Pano pane zvachose musoro
Iyo ndeimwe yeakanakisa distros andakaedza ... ini ndine komputa ine 2 ghz mbiri-yakakosha processor uye 2gb ddr2 yegondohwe uye inovhura zvese zvinoshandiswa ipapo ipapo ...
muchokwadi, ubuntu skrini yangu inoita kunge isina kujeka (ndinofungidzira ndinofanira kurodha pasi mutyairi) asi nembwanana inotaridzika kunge yakapinza zvakanyanya
Felipe daza akadaro
Icho chinyorwa chakanaka chakandibatsira zvakanyanya kuisa puppy pane yangu usb asi sezvo laptop yangu isingatsigire usb tube boot kushandisa mamwe mapurogiramu madiki ekushandisa iyo Plop Boot Manager inoshanda kubva kumarravilla pupy yakanaka kwazvo sezvo ini ndanga ndashushikana mahwindo: P
Pindura felipe daza
Zvakanaka, ndine HP 500 ine 512 ram, 1.3 processor uye 80 GB disk.
Kunyangwe isiri iyo komputa yekare pasirese, haisi yemazuva ano futi. Ini ndanga ndamboedza Ubuntu, Fedora, Debian, Mint uye mamwe akawanda ma distros, ayo pakutanga pakuona airatidzika kunge ari kufamba mushe, asi pandakavhura Open office uye bhurawuza kana imwe vhidhiyo faira yaigona kunditonhodza pano neapo. kune chimwe chinhu chakareruka, uye ini ndakatanga nekuyedza akareruka mamiriro edesktop, senge xfce, uye fluxbox, isina mhedzisiro inogutsa, kudzamara ndawana Puppy. Ikozvino, kubva kuhupenyu cd zvese zvese zvakakwana, asi kana zvasvika pakuisa pane yangu hard drive, mmmm isiri nyore kwazvo. Ini handisi komputa guru, ini handina chero ruzivo rwechirongwa uye zvakanditorera maawa mazhinji ekutsvaga maforamu kuti ndione maitiro ekumisikidza puppy grub uye kuudza iko kwekutsvaga system yangu pane hard drive. Nyika yeGNU / Linux inonakidza, asi ini ndinofunga isu tese tinogona kutaura kuti zvinotora kuyedza kwakawanda uye kukanganisa, moyo murefu, kutsungirira uye maawa nemaawa ekutsvagisa kuti pakupedzisira muve neakanaka mashandiro esisitimu yedu. (Ini ndinoda wangu Puppy)
Hupenyu hwangu hwese ndakashandisa Windows pahusimbe, husimbe kana ini handizive, nekuda kwezvimwe zvikonzero zvisina kunaka, ndakatenga acer PC, ndinoshuva imwe, asi inouya neiyo shoma kwazvo vhezheni yewindows 7 starter, uye ini ndanga ndiine matambudziko mazhinji nehutachiona hunodzokororwa senge iyo RECYCLER yandakange ndiine nguva yakaoma kubvisa nekuda kwekusaziva kwangu. Ndakagara ndichida kushandisa Linux, asi ini hapana chandinoziva nezve maitiro ekuiisa, mumwe munhu angandibatsira here?
Pindura kuna fernando.R
Zvakaitika kwandiri neOverbox se 'desktop nharaunda'